एनआरएनए अध्यक्षमा पन्त विजयी,राजनीतिकरणका कारण अबदेखि काठमाडौंमा अधिवेशन नगर्ने -पन्त !! >> आज एनआरएनए चुनाव : पन्त र आचार्यको प्यानलमा काे-काे ? >> बोनिता शर्मा बीबीसीको प्रभावशाली सय महिलाको सूचीमा >> सांसद पार्वत गुरुङविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी >> आज विजयादशमी, टीकाको साइत बिहान १० बजेर ३५ मिनेटमा >> स्विटजरल्याण्डमा दशैँ कार्यक्रम सम्पन्न !! >> महरालाई सिंहदरबार वृत्तमा राखियाे >> सभामुख निवासबाटै पक्राउ परे महरा >> आज महानवमी पर्व, तलेजु भवानी खुल्ने >> वर्षको बडा दशैंको टीकाको उत्तम साइत >>
भक्तपुर, बैशाख २ । चैत मसान्तको दिन बोडे महालक्ष्मी मन्दिर प्राङ्गणमा लिङ्गो उठाएपछि सुरु हुने जिब्रो छेड्ने जात्रा सम्पन्न भएको छ ।जात्रामा बुद्वकृष्ण बाग श्रेष्ठले छैठौं पटक जिब्रो छेडाएका छन् । बुद्धकृष्णलाई कर्मी र नाइकेहरूले विभिन्न देवगणको पूजा गरेपछि तेलमा डुबाइराखेको १० ईन्च लामो सुइरोले उनको जिब्रो छेडिदिएका थिए ।
जिब्रोको घाउमा महालक्ष्मी मन्दिरको माटो झिकेर लगाएपछि बुद्धकृष्णले नाट्येश्वरको पूजा गरेका थिए । यसभन्दा अघि चारपटकसम्म जिब्रो छेडेका बुद्ध कृष्णले २०७४ सालदेखि पूनः जिब्रो छेड्न थालेका हुन ।यो उनको छैठौं पटक हो । ब्रतसुरु भएपछि जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले खाना खान नहुने, महिलालाई छुन नहुने, जुठो, सुतकपरेका मान्छेलाई छुन तथा बोल्न नहुने र कुकुर लगायतका जनावरहरुलाई समेत छुन नहुने परम्परा रहेको छ ।
More in this category: « सिंहदरबारभित्र एक मेगावाटको सौर्य ऊर्जा	सरकारले तोक्यो सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थल »
आज एनआरएनए चुनाव : पन्त र आचार्यको प्यानलमा काे-काे ?
बोनिता शर्मा बीबीसीको प्रभावशाली सय महिलाको सूचीमा